တစ်ယောက်ထဲ အလည်မသွားသင့်တဲ့ ၅ နိုင်ငံစာရင်း | Buzzy
တစ်ယောက်ထဲ အလည်မသွားသင့်တဲ့ ၅ နိုင်ငံစာရင်း
ပြန်ပေးဆွဲမှု များ ၊ လုယက်မှု များ ကို ကြုံတွေ့ ရနိုင်တဲ့..
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်တွေအတွက် လေ့လာစရာများလွန်းပါတယ်။နိုင်ငံရဲ. ယဉ်ကျေးမှု ၊နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းတွေကြောင့် လူအများကို ပိုပြီး ဆွဲဆောင်နေတာပါ။ကော်ဖီနဲ့ နေကြာ ကို အဓိက အားထားစိုက်ပျိုး နေတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ခရီး သည်တွေအတွက် အလွန်ကို ဆိုးရွားတဲ့ ပြဿနာများရှိနေပါတယ်။ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ ဟာ အဖော်မပါပဲ ခရီး သွားလို့ မကောင်းဆုံး ၅ နိုင်ငံစာ ရင်းတွင် ထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်နေပါတယ်။အမေရိကန် အပါအ၀င် အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ. သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကို ပြန်ပေးဆွဲမှု အများဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။
ကိုလံဘီယာနိုငျငံဟာ ကမ်ဘာလှညျ့ ခရီးသညျတှအေတှကျ လလေ့ာစရာမြားလှနျးပါတယျ။နိုငျငံရဲ. ယဉျကြေးမှု ၊နောကျခံသမိုငျးကွောငျးတှကွေောငျ့ လူအမြားကို ပိုပွီး ဆှဲဆောငျနတောပါ။ကျောဖီနဲ့ နကွော ကို အဓိက အားထားစိုကျပြိုး နတေဲ့နိုငျငံလညျးဖွဈပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ခရီး သညျတှအေတှကျ အလှနျကို ဆိုးရှားတဲ့ ပွ ဿ နာမြားရှိနပေါတယျ။ ကိုလံဘီယာနိုငျငံ ဟာ အဖျောမပါပဲ ခရီး သှားလို့ မကောငျးဆုံး ၅ နိုငျငံစာ ရငျးတှငျ ထိပျဆုံးမှရပျတညျနပေါတယျ။အမရေိကနျ အပါအဝငျ အနောကျနိုငျငံတှရေဲ. သတငျးထုတျပွနျခကျြထဲမှာကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသညျမြားကို ပွနျပေးဆှဲမှု အမြားဆုံးဖွဈပှားနတေဲ့ နိုငျငံဖွဈနပေါတယျ။
လူပေါင်း ၁၅၀၀၀၀ ကျော်ဟာ နေ့စဉ် အမေရိကန်နယ်စပ်ကို ကျော်ပြီး မက္ကစီကို နိုင်ငံဘက်သို့ အပန်းဖြေခရီးသွားနေကြတာပါ။မက္ကစီကို ရဲ. မြို. တော်ဟာ ဆွဲဆောင်မှု အားကောင်းနေပြီး ခရီးသည်များကို ရိုက်နှက်လုယက်မှု တွေလည်း ပြု လုပ် တဲ့ အကျင့် ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ. ပြောကြားထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာတော့ မက္ကစီကို ဟာ လူဦးရေထူထပ်ပြီး ကမ္ဘာ လှည့် ခရီးသည်တွေကို အပြည့် အ၀ အကူအညီပေးနေတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒီလိုပြောခြင်းဟာ နိုင်ငံတွင်းသိုိ့ ခရီးသည်များဝင်လာအောင် ဆွဲဆောင်ပြောကြားခြင်းသာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လူပေါငျး ၁၅၀၀၀၀ ကြျောဟာ နစေ့ဉျ အမရေိကနျနယျစပျကို ကြျောပွီး မက်ကစီကို နိုငျငံဘကျသို့ အပနျးဖွခေရီးသှားနကွေတာပါ။မက်ကစီကို ရဲ. မွို. တျောဟာ ဆှဲဆောငျမှု အားကောငျးနပွေီး ခရီးသညျမြားကို ရိုကျနှကျလုယကျမှု တှလေညျး ပွု လုပျ တဲ့ အကငျြ့ ရှိနပေါတယျ။အမရေိကနျရဲ. ပွောကွားထုတျပွနျခကျြတှထေဲမှာတော့ မက်ကစီကို ဟာ လူဦးရထေူထပျပွီး ကမ်ဘာ လှညျ့ ခရီးသညျတှကေို အပွညျ့ အဝ အကူအညီပေးနတေယျဆိုတာ မဟုတျပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒီလိုပွောခွငျးဟာ နိုငျငံတှငျးသို့ ခရီးသညျမြားဝငျလာအောငျ ဆှဲဆောငျပွောကွားခွငျးသာ ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ပီရူးနိုင်ငံဟာ လည်း အလွန်ကို လှပတဲ့ ကမ်းခြေတွေတည်ရှိတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ မြို. တော်မှာ ရှိတဲ့ ယာဉ်မောင်း အငှားလိုက်သူတွေဟာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်တွေကို လုယက်ခြင်း ၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင်ခြင်းကဲ့သို့ ပြစ်မှု များကို ကျူး လွန်တတ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပီရူးမှာ အကြောက်ရဆုံးအချိန်ဟာ ညပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပီရူးနိုငျငံဟာ လညျး အလှနျကို လှပတဲ့ ကမျးခွတှေတေညျရှိတဲ့ နိုငျငံဖွဈနပေါတယျ။ဒါပမေဲ့ မွို. တျောမှာ ရှိတဲ့ ယာဉျမောငျး အငှားလိုကျသူတှဟော ကမ်ဘာလှညျ့ ခရီးသညျတှကေို လုယကျခွငျး ၊လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အနိုငျကငျြခွငျးကဲ့သို့ ပွဈမှု မြားကို ကြူး လှနျတတျကွတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ပီရူးမှာ အကွောကျရဆုံးအခြိနျဟာ ညပိုငျးဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
India နိုင်ငံ၏ မြို.တော်ဖြစ်တဲ့ နယူးဒေလီဟာ စီးပွားရေးအရ ကောင်းမွန်ပြီး အချက်အချာကျသည့် မြို. တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိက ပြဿနာများမှာ အမျိုး သမီးများအား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောက်ယှက်မှု များ ကို တွေ့ရသည်။အမေရိကန်အပါအ၀င် အခြားသော နိုင်ငံများ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ နယူးဒေလီသည် ငွေကြေးလုယက်မှု များနှင့် အမျိုး သမီးများအားနှောက်ယှက်မှု များဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရသည်။
India နိုငျငံ၏ မွို.တျောဖွဈတဲ့ နယူးဒလေီဟာ စီးပှားရေးအရ ကောငျးမှနျပွီး အခကျြအခြာကသြညျ့ မွို. တျောလညျးဖွဈပါတယျ။အဓိက ပွ ဿ နာမြားမှာ အမြိုး သမီးမြားအား လိငျပိုငျးဆိုငျရာ နှောကျယှကျမှု မြား ကို တှရေ့သညျ။အမရေိကနျအပါအဝငျ အခွားသော နိုငျငံမြား၏ သတငျးထုတျပွနျခကျြအရ နယူးဒလေီသညျ ငှကွေေးလုယကျမှု မြားနှငျ့ အမြိုး သမီးမြားအားနှောကျယှကျမှု မြားဖွဈပျေါနကွေောငျးသိရသညျ။
Indonesia နိုင်ငံ Jakarta မြို. ဟာ ခရီးသွားဧည့်သည်များကို များစွာ ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့မြို. တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ပြန်ပေးဆွဲမှု များ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံ နှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ. သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေ ကဖော်ပြနေပါတယ်။
Indonesia နိုငျငံ Jakarta မွို. ဟာ ခရီးသှားဧညျ့သညျမြားကို မြားစှာ ဆှဲဆောငျနိုငျတဲ့မွို. တျောဖွဈပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ပွနျပေးဆှဲမှု မြား မကွာခဏ ဖွဈပှားနကွေောငျးအမရေိကနျနိုငျငံ နှငျ့ အင်ျဂလနျနိုငျငံရဲ. သတငျးထုတျပွနျခကျြတှေ ကဖျောပွနပေါတယျ။